Isandulela — I-ONLINE LIBRARY YeBhayibheli
bi12 k. 5
IBHAYIBHELI ELINGCWELE liyisambulo esilotshiwe esivela eNkosini EnguMbusi uJehova siya kubo bonke abantu kulo mhlaba. Le ncwadi ephefumulelwe ikhanga abantu emhlabeni wonke, ngoba iqukethe izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu, ozoletha ukuthula nokulunga. Umhlaba uzoba ipharadesi labo bonke abantu. IBhayibheli libonisa ukuthi ngothando uNkulunkulu walungiselela izwe lesintu esinesono insindiso ekufeni ngomhlatshelo wesihlengo weNdodana yakhe, uJesu Kristu.—Johane 3:16.
Ekuqaleni iBhayibheli lalibhalwe ngesiHebheru, isi-Aramu (ulimi oluhlobene nesiHebheru) nangesiGreki. Njengoba bembalwa abantu abaziqondayo lezi zilimi, kuye kwaba okudingekile ukuba iBhayibheli Elingcwele lihunyushelwe ezilimini zanamuhla ukuze umyalezo walo onika ukuphila ufinyelele kubantu bazo zonke izizwe.
Le nguqulo entsha yeBhayibheli lesiZulu isekelwe ohlelweni lwesiNgisi lwe-New World Translation of the Holy Scriptures luka-1984. Iqukethe izincwadi ezingu-39 zemiBhalo yesiHebheru nesi-Aramu nohlelo olubukeziwe lwesiZulu lwezincwadi ezingu-27 zemiBhalo YamaKristu YesiGreki eyanyatheliswa ngo1994. IKomiti Yezwe Elisha Yokuhumusha IBhayibheli yanquma ukubiza lezi zingxenye ezimbili zemiBhalo Engcwele ngezilimi ezazibhalwe ngazo kuqala esikhundleni sokusebenzisa indlela evamile yokuthi “ITestamente Elidala” nokuthi “ITestamente Elisha.” Lokhu kungenxa yokuthi eqinisweni iBhayibheli liyincwadi eyodwa, ayikho ingxenye esidlulelwe isikhathi noma “endala.” Umyalezo walo uyavumelana kusukela encwadini yokuqala engxenyeni yesiHebheru kuze kuyofika encwadini yokugcina engxenyeni yesiGreki. Ukuze kusizwe umfundi ekutadisheni kwakhe iBhayibheli lilonke, kuye kwafakwa izikhombo ezingaphezu kuka-125 000 zemibhalo namagama aseBhayibhelini.
Njengoba iBhayibheli lisitshela intando engcwele yeNkosi EnguMbusi, bekungaba ukuyehlisa isithunzi okukhulu, ngempela ukululaza ubukhulu bayo negunya layo, ukususa noma ukufihla igama layo eliyingqayizivele, elivela ngokusobala izikhathi ezicishe zibe ngu-7 000 embhalweni wesiHebheru. Ngakho isici esivelele kunazo zonke kule nguqulo ukubuyiselwa kwegama likaNkulunkulu endaweni yalo efanele embhalweni weBhayibheli. Lokhu kwenziwe izikhathi ezingu-6 973 emiBhalweni yesiHebheru nezingu-237 emiBhalweni YamaKristu YesiGreki kusetshenziswa indlela evamile yesiZulu ethi “Jehova.” Uma ufuna ukutadisha le ndaba, bheka Isithasiselo salolu hlelo.
Abahumushi baleli Bhayibheli, abamthandayo uMlobi Wasezulwini WemiBhalo Engcwele, bazizwa benesibopho esikhethekile kuye sokudlulisela imicabango yakhe nezimemezelo zakhe ngokunembe kangangokunokwenzeka. Bazizwa benesibopho nakulabo bafundi abacwaningayo abathembele eZwini eliphefumulelwe likaNkulunkulu oPhezukonke elihunyushiwe ukuze bathole ukusindiswa kwaphakade. Sethemba ngobuqotho ukuthi ngosizo lwale nguqulo, umfundi uyothola indlela eya ekuphileni okungapheli ezweni elisha lokulunga loMninimandla Onke.—Isaya 65:17; 2 Petru 3:13.